यदि तपाईं युरोपको नक्सामा हेर्नुहुन्छ र एसिनेन प्रायद्वीप पत्ता लगाउनुहुन्छ भने , तपाई ज्वालामुखी भिसेउयुसको भौगोलिक समन्वयको प्रयोग गरेर नेपल्स नजिकै भेट्टाउन सक्नुहुन्छ।
संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध ज्वालामुखी
इटाली मा नेपल्स को खाडी को खूबसूरत तट मा, असामान्य आकार को यस पर्वत को उगता, शहर को नाम देखि दूर नहीं। यो सम्भवतः संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध ज्वालामुखी हो। यो अधिक विस्तारमा छलफल गर्न लायक छ।
संसारको सबैभन्दा फराकिलो ज्वालामुखी र यूरोपको महाद्वीपीय भागमा केवल एक मात्र काम, यसले प्रसिद्ध विनाशको साथ रगतको महिमा कमायो, सम्पूर्ण शहरहरू पृथ्वीको अनुहारमा डुब्न थाल्यो। तिनको पीडितहरू पोपाइ, हरकुलनेम, स्ट्याबिया, ओप्प्टोटी र इटालीका अन्य नीतिहरू थिए।
Vesuvius ज्वालामुखी को भौगोलिक समन्वयक पूर्वी देशान्तर 40 डिग्री 49 मिनेट उत्तर अक्षांश र 14 डिग्री 25 मिनेट हो। यो पर्वत पूर्वी र उत्तरी गोलार्द्धमा स्थित छ। यसैले, Vesuvius ज्वालामुखी को देशान्तर र अक्षांश पूर्वी र उत्तरी छ।
किन इटालीहरू भिसेयुसमा आकर्षित हुन्छन्
यदि तपाईं नक्सामा हेर्नुहुन्छ, र Vesuvius ज्वालामुखीको भौगोलिक समन्वय प्रयोग गरेर, यो भयानक पर्वत फेला पार्न, तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो बसोबासबाट सानो दूरीमा छ। ज्वालामुखीको उच्च गतिविधिको बावजूद, तीन सय शताब्दी भन्दा लामो समयसम्म मान्छेहरू नजिकैको र यहाँको ढोकामा बसोबास गर्न बन्द भएन, आफूलाई मृत्युको दैनिक जोखिममा उजागर गरे। र यसको कारण कारण ढलान को अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी, ज्वालामुखी राखी संग ज्वालामुखी राखयो। यस्तो मिट्टीमा, अङ्गुर र अन्य फसलका अभूतपूर्व खेतीहरू सधैँ पोलेको हुन्छ। र ज्वालामुखीको विशाल र कठोर सुन्दरता, 0.75 किलोमिटरको चौडा "जेभ" चौडाईको साथ 1.3 किमी को उचाईरहेको छ, इटालीहरूलाई जसले यस्तो सुन्दर स्थानमा बाँच्न चाहन्छ।
Vesuvius को अत्याधिक अचलन भन्दा बढी रेकर्डहरुमा रेकर्ड गरिएको छ। त्यस्ता घटनाहरूको थोक 17 औं शताब्दीदेखि (1631-1944) सम्मको "आगो-सासना पर्वत" को सबैभन्दा ठूलो गतिविधिको अवधिमा हुन्छ।
सबैभन्दा लोकप्रिय हो ख्रीष्टको जन्म 79 वर्षको घटना हो, जब दुई ठूला शहरहरू त्यस समय नष्ट भए - पम्पीपी र हरकुलेनियम। त्यो शुभकामनामा, ज्वालामुखीका पीडितहरू दुईपल्टभन्दा बढी मृत भएका थिए, केवल पोपाइपीमा, ज्वालामुखी आश3मीटरको मोटो मोहोरोको छेउमा दफन गरियो। यो उल्लेखनीय छ कि ज्वालामुखीले विशाल धब्बेको आगामी विनाशको संकेत गरेको छ र धेरै शहरी बासिन्दाहरूले जीवन बिताउन सक्दछन्। ती व्यक्तिहरूमा मारिएका व्यक्तिहरू जुनसुकै विनाशमा पूर्णतया विश्वास गरेनन् वा वादीले आफ्नो सम्पत्तिलाई बचाउँछन्।
घातक घटनाहरु 1631 मा दोहोर्याइएको थियो, जब Vesuvius को एक अन्य सक्रियता यस शहर को चार पल्ट शहर को अनुहार देखि मेट्यो। पीडितहरू तीन हजार भन्दा बढी व्यक्ति थिए, जसको सम्झनामा नेपल्स शहरमा स्मारक बनाइएको थियो।
बीसौं शताब्दीमा, दुई ठूलो विनाशहरू रेकर्ड गरियो - 1906 मा, ओटाभियानो पूर्णतया विनाश भएको थियो र 1944 मा, जब लावा प्रवाह झिकेर माथिको किमिटर माथि एक किलोमिटर माथि पुग्यो र दुईवटा इटालियन शहरहरू मारिए ।
यो ल्यान्डमार्क भ्रमण गर्न, तपाइँ ज्वालामुखीको भौगोलिक समन्वयको प्रयोग गरेर यसको खोजी गर्न आवश्यक छैन। Vesuvius लामो लामो पर्यटकहरु लाई ज्ञात गरिएको छ, र यो कसरी प्राप्त गर्न, यो पत्ता लगाउन सजिलो छ। साथै, ज्वालामुखीको क्षेत्रमा एक सुसज्जित राष्ट्रिय पार्क छ। जो लोग ह्यान्ड्रोइल संग माउन्ट मार्ग माउन्ट विसेयुस को ढलान संग एक पैदल यात्रा गर्न सक्छन्। यस अवस्थामा, धेरै ढलान एक मिनिबस द्वारा पराजित गर्न सकिन्छ, एकै ठाउँमा मा एक किलोमीटर भन्दा बढी हुनेछैन। यो माथि धेरै माथि पास पारिएको छ, एक घातक विलापमा हेर्न सक्छ, ज्वालामुखी वाष्पीकरण को देखेर क्रिश्चियस र दरार बाट बढ्दै जान्छ, र यस उचाइबाट भव्य दृश्यहरु लाई पनि प्रशंसा गर्दछ।
शुल्कको लागि माथिको टिकट 18 यूरो, शुल्कको लागि तपाईले कार पार्कमा (2.50 यूरो) मा छोड्न सक्नुहुनेछ। चढाई पछि, तपाईं नजिकको क्याफेमा आराम गर्न सक्नुहुन्छ, कफी वा स्थानीय शराब पिउन सक्नुहुन्छ।
Vesuvius एक सक्रिय ज्वालामुखी हो, तर यस समय यो एक अस्थिर राज्य मा छ। यस तथ्यको बावजुद हालको समयमा फराकिलो पर्वतले गतिविधिको कुनै पनि गम्भीर संकेतहरू देखाउँदैन, ज्वालामुखी प्रयोगशाला यसको वरिपरि रहेको छ, जसले निरन्तर गतिविधि Vesuvius को निगरानी गर्दछ।
आमाबाबुको बैठक कसरी गर्ने? सिफारिसहरू
हामी नर्वे, लुगा, डोल्गाया, वरभरी, ओखटा: लन्निंगग्रा क्षेत्रका नदीहरूको अध्ययन गर्दछौं
"कप्तानको छोरी" मा निबंध कसरी लेख्नुहुन्छ?
महिलाको अन्नामी मानव अभिन्नता (जीवविज्ञान, ग्रेड 8)
रोचक तथ्य: किन मानिसहरू सानो औंला मा एक नड़ बढ्न
कर्मचारी प्रेरणा वृद्धि गर्न एक उपकरण रूपमा संगठनको कर्पोरेट संस्कृति
ककडी-खरबुजा - एक दुई
अपार्टमेन्ट र घरहरू लागि घरेलू ग्याँस मीटर
Nikolai Baskov को रचनात्मक जीवनी
आज जो ल्याप्टप राम्रो हो?
रबर जूता शिकारी: तिनीहरूले किन हो?
पार्किङ किन सहयोग गर्दैन
शुक्लपक्ष चन्द्रकला - जादू र floriculture लागि उत्तम समय